नायिका केकी अधिकारी नयाँ लुक्समा किन खौरिन कपाल ? – Khabar Patrika Np
नायिका केकी अधिकारी नयाँ लुक्समा किन खौरिन कपाल ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ०२, २०७७ समय: ९:५०:४७
चलचित्र क्षेत्रमा चलेका नायिकामध्येकी एक हुन्-केकी अधिकारी । उनी काममा जति रुचि राख्छिन् उति नै व्यक्तित्वमा पनि ध्यान दिन्छिन् । कला क्षेत्रमा पहिरन र सुन्दरतामा बढी ध्यान दिइने भए पनि केकी पहिरनमा भन्दा सकारात्मक सोचमा सुन्दरता एवं व्यक्तित्व लुकेको दा’बी गर्छिन् ।